Awareness – My Life Magazine
पत्रपत्रिकामा राखेका खानेकुरा खानुहुन्छ ? लाग्न सक्छ यस्तो…
AwarenessJanuary 7, 2020
पत्रपत्रिका वा कागजमा मिठाईहरु राखेर खाने अहिले धेरैको बानी हुन्छ । के गाउँ के सहर प्रायः ठाउँमा पसलेहरू चटपटे, समोसा, पकौडा, पुरी, जेरी, मिठाईजस्ता खानेकुरा अखबारमा बेरेर दिने गर्छन् । अर्कातिर, धेरै व्यक्ति घरमा खाना…
चाउचाउ खानेहरु सावधान ! चाउचाउको सेवनले हृदयाघात देखि…
AwarenessJanuary 1, 2020
चाउचाउ कत्तिको खानुहुन्छ ? निकै सजिलो र स्वादिलो खाजाका रुपमा चाउचाउ धेरैले खाने गर्छन् । चाउचाउमा प्रयोग हुने रसायनले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पूराउने खालका विभिन्न समाचारहरु विगतमा आउने गर्थे । तर पछिल्लोपटक गरिएको एक अनुसन्धानले…
किन हुन्छ मुखको क्यान्सर ? यी हुन्, बच्ने…
मुखको क्यान्सर महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखिन्छ । मुखमा हुने तन्तुको कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा वृद्धि भएमा मुखको क्यान्सर हुने गर्छ । मुखको क्यान्सर ओठ, जिब्रो, जिब्रोमुनिको भाग, गालाको भित्री भार र तालुमा हुने गर्छ ।…
AwarenessDecember 23, 2019
हिउँदे मौसमको सुरुवातसँगै जाडो छल्नका लागि भनेर ब्लोअर वा हिटर प्रयोग गरिन्छ । तर, यी सामान उपयोग गर्न नजान्दा स्वास्थ्यमा असर पर्ने मात्र नभएर दुर्घटनासमेत हुन सक्ने भएकाले यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ : हिटरबाट…
के तपाई हाई हिल लगाउनु हुन्छ ? थाहा…
AwarenessDecember 22, 2019
एजेन्सी । ‘हाई हिल’ स्टाइल र उचाइका लागि लगाइन्छ। महिलाहरू हाई हिल लगाएर हिँडिरहँदा निकै सतर्क र अप्ठेरो महसुस गरेझैं देखिन्छ। उचाइ र स्टाइलिस त हाई हिलले देखाउला तर, हाई हिल लगाउनु सहज भने हुँदैन। एकातिर…
AwarenessDecember 16, 2019
अल्कोहलले कलेजोमा के असर गर्छ ?कलेजो शरीरभित्रको दोस्रो ठूलो अंग हो । कलेजोले शरीरमा ऊर्जा भण्डारण गर्ने, खाना पचाउने, विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । यसले शरीरमा पाँच सयभन्दा बढी फरक–फरक काम गर्छ । कलेजोले प्रोटिन, काब्र्रोहाइडेट…
‘आँखा इन्फेक्सन’को समस्या बढ्दै, ध्यान दिऊँ यी कुरामा
AwarenessNovember 26, 2019
पछिल्लो समय ‘आँखाको इन्फेक्सन’ बढ्दाे क्रममा छ। नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण आँखाको समस्या मात्रै नभएर अन्य समस्याका बिरामी पनि बढी रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्। सडकमा उड्ने धुलोमा भाइरस र ब्याक्टेरिया धेरै हुने कारण आँखा रातो हुने…
AwarenessNovember 15, 2019
प्रविधिको स्वस्थकर प्रयोगका लागि बेलुकी खानाको समय र सुत्ने समयमा मोबाइल फोनको प्रयोग निषेध गर्न ब्रिटेनका स्वास्थ्य प्रमुखहरूले सुझाव दिएका छन् । बालबालिकाहरूलाई एक पटकमा दुई घण्टाभन्दा लामो समय मोबाइल फोन वा टिभी हेर्न दिनु…
AwarenessNovember 11, 2019
अहिले वायु प्रदूषणले देश तथा विदेशमा पनि प्रभाव पारेको छ । दूषित हावाका कारण हामीले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु भोग्नु परिरहेको । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरले हामी दिन–दिनै विभिन्न रोगका शिकार बन्दै गएका छौं ।…